Mashandisiro ekuita emergency runhare muIOS 11 | IPhone nhau
Maitiro ekushandisa iyo yekukurumidzira kufona muIOS 11
Kwemazuva mashoma, yekupedzisira vhezheni yeIOS 11 yave ichiwanikwa kune chero mushandisi aine inoenderana mudziyo. Imwe yezvinhu zvitsva zvinopihwa neiyi nyowani vhezheni inowanikwa mune basa iro rinotibvumidza isu kuti tifonere kune emergency emergency munyika medu. nenzira inokurumidza, yakangwara uye yakapusa.
Iyi emergency emergency yakagadzirirwa kuti kana mushandisi weiyo iPhone ari munjodzi kana akaita tsaona inomutadzisa kushandisa chishandiso mune zvakajairika mamiriro. Kuti tishandise isu tinongofanira tinya bhatani riri on / off kashanu mumutsara.
Kana iwe ukadzvanya bhatani rekuvhara / rekurara kashanu, sarudzo nyowani inonzi Emergency SOS ichaonekwa, sarudzo yatichafanirwa kutsvedza kutanga kufona. Asi Apple yave kuda kuita kuti zvinhu zvive nyore, chimwe chinhu chinozivikanwa mukambani, uye mukati mekumisikidza sarudzo tinokwanisa kuzvisimbisa izvo iyo yekufona inoitwa yakananga nekudzvanya kashanu pane off / hope bhatani. Kana isu tikamisikidza iyi sarudzo mukati meiyo sarudzo yekumisikidza, kana uchiimisa, kuverenga kunowoneka pachiratidziro che iPhone yedu, kuverenga kunotangira panhatu uye kana kwasvika pa0 kunozodaidza.
Nenzira iyi tinodzivisa kuve nekusimbisa iko kudana nekutsvedza chigunwe chedu kana tiri mumamiriro ehutano kuhutano hwedu. Pakati pesarudzo dzekumisikidza sarudzo iyi, Apple inotibvumidzawo kuti tiwedzere Emergency Contacts, kwatinogona kuwedzera kuti tizivise ani kana tikasangana nenjodzi. Tinogona zvakare bvisa yambiro yekuverenga kuverenga kana iyo otomatiki yekufona sarudzo yaitwa.
Muiyo iPhone X maitiro ekuita mafoni ekukurumidza akasiyana, sezvo tichifanira tinya bhatani repadivi uye bhatani revhoriyamu pamwechete, panzvimbo pekutsikirira ka5 pane bhatani rekubvisa / rekurara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Maitiro ekushandisa iyo yekukurumidzira kufona muIOS 11
Meseji inoonekwa pachiratidziri
Vanokurumidza kutaura navo vaziviswa
uye foni yakavharwa
Encarna Ferrer Galindo akadaro
Ini netsaona ndakarova bhatani reSOS, uye ipapo meseji inonyevera vandinoshamwaridzana navo inoonekwa, ikozvino ndine foni yakavharidzirwa, chii chandinofanira kuita:?
Pindura Encarna Ferrer Galindo
Edza iyo nyowani Yakawedzera Yechokwadi yeiyo iOS 11 neaya maapplication